Romelu Lukaku Oo Si Cad U Sheegay Tababarayaashii Uu Lasoo Shaqeeyay Kuwooda Uu Abid Ixtiraami Doono - Miyuu Ku Daray Solskjaer Oo Man United Ka Diray? - Gool24.Net
January 24, 2020 Apdihakem Omer Adem
Weeraryahanka ree Belgium ee qaybta ka ah kooxda Inter Milan Romelu Lukaku ayaa shaaca ka qaaday liis tababarayaal ah oo uu aaminsan yahay inay waxa ugu weyn kusoo tareen isla markaana uu abid ixtiraam u hayn doono.
Romelu ayaa sidii qofkasta filanayay liiska tababarayaashaas ka saaray macalinka Man United ee haatan Ole Gunnar Solskjaer kaas oo kamid ahaa sababaha uu uga dhaqaaqay Old Trafford suuqii xagaaga.
Lukaku ayaa tan iyo markii uu u dhaqaaqay horyaalka Serie A iyo dhinaca Inter noqday mid dib u helay qaab ciyaareedkiisii fiicnaa isaga oo kooxdaas ka caawinaya inay si adag ugu tartanto horyaalka xilli ciyaareedkan.
Haddaba, Lukaku oo haatan saxaafada u warramay ayaa ugu horreynba ku adkaystay inuusan jirin hal tababare oo uu wax ka tirsanayo dhibaatona ku qabay dhammaan tababarayaasha ay soo wada shaqeeyeen balse Ole u diiday liiska tababarayaasha sii horumariyay.
Lukaku oo u warramayay Sky Sports sheegayana tababarayaasha uu ixtiraami doono ayaa yidhi “Waxaan filayaa Roberto Martinez, Ronald Koemen iyo haatan Antonio Conte”.
“Waxaan filayaa Jose Mourinho, Haddii uu (Man United ku) haysan lahaa ciyaartoyda uu doonayay, Waxa uu qaban lahaa shaqo ka wanaagsan wixii uu qabtay”.
“Steve Clarke, Si weyn ayaan u xusayaa isaga sababtoo ah waxa uu i siiyay fursada aan kaga ciyaarayo Premier League aniga oo 19 sano jir ah iyo sida iska cad tababarahaygii ugu horreeyay ee Anderlecht, Ariel Jacobs, Kaas oo i siiyay fursada isla markii aan noqday 16 sano jir”.